59s Marvel&#39;s Avengers: မင်းရဲ့စွမ်းအားတွေကိုလက်ခံပါ images and subtitles
Ghrrrr ဒါကအထင်ကြီး entry ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ငါဂျာစီကနေထူးဆန်းတဲ့မိန်းကလေးတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ဖျူးမပေးခဲ့ပါဘူး။ ဒီမိန်းကလေးကလူမဆန်ဘူး ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီလိုအပ်သောကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဖြင့်လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လူတွေကသေစားသေစေသောသူကိုယုံတယ်။ ငါတို့ဒီမှာထိုင်ပြီးအချိန်ဖြုန်းလို့မရဘူး။ ပိုလန်! တ ဦး တည်းဖြောင့်မတ်မွေးဖွားမဟုတ်ပါဘူး။ မင်းအပေါ်မှာ ယုံကြည်ခြင်း သင်၏စွမ်းရည်များ သို့သော်သူ၏လုပ်ရပ်များနှင့်အတူ။
Marvel&#39;s Avengers: မင်းရဲ့စွမ်းအားတွေကိုလက်ခံပါ
< start="12.03" dur="1.49"> ဒါကအထင်ကြီး entry ကိုဖြစ်ပါတယ်။ >
< start="14.27" dur="3.84"> ငါဂျာစီကနေထူးဆန်းတဲ့မိန်းကလေးတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ဖျူးမပေးခဲ့ပါဘူး။ >
< start="18.2" dur="1.23"> ဒီမိန်းကလေးကလူမဆန်ဘူး >
< start="19.5" dur="2.73"> ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီလိုအပ်သောကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဖြင့်လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ >
< start="23.02" dur="2.33"> လူတွေကသေစားသေစေသောသူကိုယုံတယ်။ >
< start="26.08" dur="2.07"> ငါတို့ဒီမှာထိုင်ပြီးအချိန်ဖြုန်းလို့မရဘူး။ >
< start="28.33" dur="1.84"> ပိုလန်! >
< start="43.03" dur="1.97"> တ ဦး တည်းဖြောင့်မတ်မွေးဖွားမဟုတ်ပါဘူး။ >
< start="45.05" dur="0.33"> မင်းအပေါ်မှာ >
< start="47.01" dur="0.33"> ယုံကြည်ခြင်း >
< start="49.07" dur="0.33"> သင်၏စွမ်းရည်များ >
< start="49.43" dur="1.72"> သို့သော်သူ၏လုပ်ရပ်များနှင့်အတူ။ >